प्रदेश १ मा आज १ सय ३९ संक्रमित थपिए | रेडियो झापा 100.7 MHz.
रेडियो झापा 100.7 MHz. मंगलबार, भाद्र ०२, २०७७ १५:५२:०७
विराटनगर, २ भदौ । प्रदेश १ मा आज १ सय ३९ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । मोरङमा १ सय ५, झापामा २०, सुनसरीमा ६, संखुवासभामा ३, उदयपुरमा २, पाँचथर र प्रदेश १ बाहिरका २ जना रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । संक्रमण देखिएका मध्ये ४२ महिला र ९७ जना पुरुष छन् ।